မြန်မာ အားကစားသမားတွေ လူကောင် သေးကုန်ကြပြီ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| November 1, 2012 | Hits:6,299
8 | | အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဂျကာတာ မြို့တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်းက ကျင်းပသော ၂၆ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်း ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား(ဓာတ်ပုံ – theseagames2011.blogspot.com)
“ကမ္ဘာ့ဖလားကို မသွားနိုင်တဲ့ အတွက် ကျနော်တို့ကို ခွင့်လွှတ် နားလည်ပေးကြပါ”
“Talent နဲ့ တိုင်းပြည် ချစ်စိတ်ရှိလို့ နိုင်လာတာ”
“အောင်မြင်ချင်ရင်တော့ သူများနိုင်ငံလိုပဲ ပံ့ပိုး ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လိုတယ်”
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 2, 2012 - 2:30 am	ဦးမြသန်းထိုက် ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ သင်ပေးသူက နည်းလမ်းကောင်း သင်ပေးနိုင်ပေမယ့် အားကစား သမားကိုယ်တိုင်က အရပ်အမောင်း ခန္ဓာကို ပေမီ ဒေါက်မီ ဖြစ်မှ ယှဉ်နိုင်မှာပါ။ မဟုတ်ရင် သူများ ၂ လှမ်းပြေးတာ ကိုယ်က ၃လှမ်း လှမ်းနေရမယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ လုပ်သလို မူလတန်း မဟုတ်တောင် အလယ်တန်းအရွယ်၊ ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ်လောက်ကတည်းက အလားအလာရှိသူ ကလေးတွေကို ကျောင်းတွေမှာ လိုက်ရှာရွေးပြီး အားကစား အထက်တန်းကျောင်းလိုမျိုး ဖွင့်၊ သင့်လျောရာ အားကစားကို ကျင့်ရင်း သက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ အားဖြစ်မယ့် အစာတွေ ကျွေး (စားဖိုမှုးကတော့ ဖြတ်မစားနဲ့ပေါ့)။ ပြီးတော့ အားကစား တက္ကသိုလ်လိုဖွင့်ပြီး စာလဲ တဘက်ကသင်၊ အားကစားလဲ တဘက်က ကျင့် ဆိုရင် ပြန်တက်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Reply	bota November 2, 2012 - 7:49 pm	Rights မရှိ၊ Law မကြီးစိုး၊ ၀ါးတီး မ မှန်၊ လူမှန် မ ရွေး၊ မ အက္ခရာတွေများလွန်းလှတဲ. မြန်မာမှာ…. မောတယ်!